Maxkamadaha socdaalka oo lagu eedeeyay in aysan dhageysan caruurta magangalyo doonka ah | Somaliska
Maxkamadaha socdaalka Sweden (Migrationsdomstolar) ayaa lagu eedeeyay in aysan fursad u siin dadka da’da yar isku dhiiba in ay ka hadlaan gudaha maxkamada oo ay dacwadooda soo bandhigaan. Baaritaan ay sameysay idaacada Ekot ayaa lagu soo bandhigay in 4 tii caruur ah 1 mid oo keliya loo ogolaaday in ay dacwadooda soo bandhigaan.
Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in ilaa bishii janaayo maxkamaduhu ay qaadeen kiisaska 520 caruur ah balse ay fursad in ay halaan u siiyeen 145 oo keliya. Caruurta aadka u yar ama kuwa laga cabsanayo in maskaxdooda uu wax gaaro ayaa ka reeban in ay ka hadlaan maxkamadaha.
Dhinaca kale farqi weyn ayaa u dhaxeeya hab dhaqanka maxkamadaha kala duwan ee dalka. Afarta maxkamadood ee qaabilsan arimaha Socdaalka ayaa mida ku taala magaalada Göteborg la sheegay in ay tahay mida ugu adadag. Dadka ku xeel dheer cilmiga ayaa sheegay in ay wax qaldanyihiin oo loo baahanyahay in qofka la maxkamadeynayo uu fursad u helo in uu kiiskiisa soo bandhigo. Siyaasiyiinta baarlamaanka ayaa dalbaday in isbedal la sameeyo.
naajmo jama ismail says:
anigoo ah najmo fikrada an dhiibanayo waxay tahy ianay waxkabedelaan dowlad sweden arinta somali waayo waxaan ahay qof familkeda kamaqanyiyiin wana waxaan kacodsane dareemi kartin dhibatada uu leeyahy hadii ay sidaan ay sameenayaan maba ahy inay deganasho nasiya haday sidaan ka bedelnin madafiicdii hanoo ceyaan aan taganahy aan la qeebsano dhibatada familkeen